2 - 4 Septhemba 2020Shanghai, China! Uyemukelwa ku-Cinte Techocolil China!
（I-Cinte Techocolil China ihamba phambili kwezohwebo kwezempahla yezobuchwepheshe kanye nemikhiqizo engeyona ye-Asia futhi ikleliswa okwesibili kuphela ekubonisweni kukaDade wayo weTechPressil eJalimane emhlabeni jikelele.I-Fair iziqhayise ngendawo yombukiso ye ...
Kungani sisebenzisa ukuzizwa sifunde i-calligraphy?
ngu admin ngo 20-08-08
Kungani sisebenzisa ukuzizwa sifunde i-calligraphy? Angazi uma usakhumbula ukuthi uma ubhala i-calligraphy esikoleni samabanga aphansi, izikole zizohlomisa umuntu oyedwa ngomuzwa omncane. Kungani usebenzisa ukuzizwa ukwenza i-calligraphy? Namuhla, abakhiqizi abanomuzwa bazokutshela ...
Onodoli bomunwe abenziwe ngezindwangu ezingezona ezilukiwe benzelwe izingane!
Sanibonani nonke! Labo kini abaneZingane ekhaya, unawo umkhuba wokutshela izingane zakho izindaba ebusuku? Noma dlala imidlalo nezingane zakho ngesikhathi sakho samahhala? Izingane emndenini wethu zilangazelela kakhulu isikhathi sezindaba njalo ebusuku. Akunandaba ukuthi ubuqili ...
I-Chemical fiber ibona kufanele sinake okubalulekile
Kunezindawo eziningi lapho kusetshenziswa khona i-fiber fiber eyenziwe ngamakhemikhali, umuzwa muhle kakhulu, ezindaweni eziningi kuyabandakanyeka kuzo. Kepha ekusetshenzisweni kwalo mkhiqizo kudingeka sinake izindaba ezithile, ukuze siwusebenzise kangcono. UFelt usempilweni yethu ins ...